काठमाडौं, ७ माघ । धितोपत्र बजारमा सोमबार शेयरको मूल्य दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १०.८६ बिन्दुले घटेर एक हजार १६८.०६ बिन्दुमा पुगेको छ ।
यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.८७ बिन्दुले घटेर २४७.६१ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार कूल १६६ कम्पनीको १२ लाख ६५ हजार ७८६ कित्ता शेयर रु. ३६ करोड ७७ लाख छ हजार ६३८ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् ।
आज कारोबार भएका कूल ११ उपसमूह मध्ये आज वित्त उपसमूह ०.६५ बिन्दुले बढेको छ । यस्तै बैंकिङ ४.६२, व्यापार २.९६, होटल १९.५२, विकास बैंक ७.७६, जलविद्युत् ४२.१७, निर्जीवन बीमा ४२.६७, उत्पादन २३.५२, अन्य ११.६०, लघुवित्त २५.५१ र जीवन बीमा ६१.६८ बिन्दुले घटेको छ ।
त्यसैगरी स्टकमा आजै सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर कारोबार सुरु भएको छ । सो संस्थाको सुरुआती कारोबारका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम रु. १६८ र अधिकतम रु. ५०५ रहने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।